အသည်းကွဲဝေဒနာတွေ လျော့ပါးသွားစေမယ့် အချက် (၆)ချက် - For her Myanmar
ကုသဖို့ မလွယ်ပေမဲ့ …
ကိုယ် သိပ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ လမ်းခွဲရတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ကိုထိခိုက်နာကျင်ရလဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လွဲပြီး ဘေးကလူတွေကလည်း သိပ်နားမလည်ပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက အသည်းကွဲဖူးတဲ့သူတွေ ဖြစ်သည့်တိုင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူတဲ့အတွက် နားလည်မပေးနိုင်ကြတာကလည်း ပုံမှန်ပဲလေနော်…
လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်း အရင်လို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆက်သွယ်တွေ မရှိကြတော့တဲ့ အခါ … အရင်က အတူတူစားခဲ့ဖူးတဲ့ မုန့်တွေ၊ ဖုန်းပြောခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်တွေ၊ အတူတူသွားခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတွေ ပြန်တွေးကြည့်မိသလို ဒီအချိန်ဆို သူဘာတွေများ လုပ်နေမလဲ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့လဲ၊ ဘယ်မှာ ရှိနေမှာလဲ က အစချီလို့ အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ အရူးတစ်ယောက်လို ပူလောင်နေတတ်ကြတဲ့ အဖြစ်ကိုလည်း ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲပြီး အသည်းကွဲဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း ခံစားဖူးမှာပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ သတိမရအောင်နေနေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ မေ့ထားတယ်ဆိုဆို တိုက်ဆိုင်တာတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ … တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေတဲ့အခါ…ဝမ်းနည်းစရာတွေ ရှိလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖုန်းကောက်ဆက်ပြီး သူ့ကို ရင်ဖွင့်ချင်တဲ့ စိတ်တွေက ကျန်နေသေးတာ မဟုတ်လား…
ဒါပေမဲ့ … ကိုယ့်စိတ်ကို အလိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဆက်ဖြစ်လာမယ့် အရာတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရဲ့လား? သူ့ဘက်က ဖောက်ပြန်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုမှ ညှိမရတော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် … ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်နဲ့ပဲ လမ်းခွဲ လမ်းခွဲ … ပြန်ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေတဲ့ relationship မျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ အဓိက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြင်ဆင်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ဘာတွေများ လိုအပ်မလဲ??
၁။ ဒဏ်ရာကျက်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။
အချိန်ကာလတခု အထိ တူတူရှိနေတဲ့ အတွက် ချက်ချင်းကြီး မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ။ ဒီတော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာကို အတင်းကြီး မလုပ်ယူဘဲ သတိရတဲ့ အချိန်မှာ သတိရပါ။ ငိုချင်လာရင် ငိုချလိုက်ပါ။ ဒီလို လုပ်ခြင်းက တမြည့်မြည့်နဲ့ အကြာကြီး မခံစားရတော့ဘဲ ကြာလာတဲ့အခါ ဝေဒနာက တဖြေးဖြေး လျော့ပါးလာပါလိမ့်မယ်။ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေ သက်သာလာလေလေ ဒဏ်ရာကျက်ဖို့ နီးလာလေလေပါ။ အမာရွတ်ကျန်တာတော့ ကျန်တာ တစ်ပိုင်းပေါ့လေ…
Related Article >>> အသည်းကွဲခြင်းက ပေးနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာ (၄)ခု
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ။
အိပ်ချိန်မှန်မှန်အိပ်၊ အစားပုံမှန်စားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှအောင်နေပါ။ ချစ်သူနဲ့ ကွဲလို့ နေချင်သလိုနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် အရှုံးတွေချည်းပါပဲ။ ကိုယ့်ကို မချစ်လို့ နီးစပ်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ အဝေးခံလိုက်တဲ့သူအတွက် ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံး ရေစုန်မျောပစ်စရာ မလိုပါဘူး။ အရင် သူမရှိခင်ကလည်း တစ်ယောက်တည်းပဲ နေခဲ့တာပဲလေ။ တစ်ယောက်တည်း အားနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ မကောင်းတဲ့အတိတ်က အမှတ်တရတွေကို တွေးနေမယ့်အစား Youtube ကနေ makeup tutorial တွေ ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှအောင်ပြင်နေလိုက်ပါ။ မိတ်ဆွေသစ်တွေ ရှာပါ။ တော်သည်ထက် တော်လာအောင် ကြိုးစားပါ။
တစ်ခုရှိတာက အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ချစ်ကြည်နူး၊ တစ်တီတူးနေကြတဲ့ အချစ်ငှက်တွေကို ကြည့်မိရင် ကျက်စပြုနေတဲ့ ဒဏ်ရာက ပြန်အက်ကြောင်းထင်လာတတ်တဲ့ ပြဿနာပါပဲ။ ချစ်သူများနေ့လို နေ့မျိုးဆို ပိုဆိုးပေါ့… အိမ်တွင်းပုန်းနေပြန်ရင်လည်း အထီးကျန်၊ အပြင်ထွက်ရင်လည်း အတွဲလေးတွေကြည့်ပြီး ကြေကွဲဆိုတော့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိပေါ့… ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆို တစ်ချက်ခုတ်၊ နှစ်ချက်ပြတ်စေမယ့် အဖြေကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်မှာ မိတ်ဆွေသစ်တွေ ရှာဖွေတာပါပဲ။ ဥပမာ မနှစ်က For Her Myanmar က စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ Single Ladies’ Night လိုပွဲမျိုးပေါ့… သူငယ်ချင်း အသစ်တွေနဲ့လည်း ဆုံနိုင်သလို ကိုယ်လည်း လှလှပပလေး ပြင်ဆင်လို့ရတယ်၊ စိတ်သစ်လူသစ်ပုံစံမျိုးလည်း ဖြစ်သွားတယ်၊ အချစ်ငှက်တွေကိုလည်း မျက်စိနောက်စရာ မလိုတော့ဘူးလေ… ဒီနှစ် ချစ်သူများနေ့ (၁၄.၂.၂၀၁၉)မှာလည်း ဒီလို ပွဲမျိုးလေး စီစဉ်ထားပေးဦးမှာပါလို့… အသေးစိတ်ကတော့ မကြာမီ လာမည် မျှော်ပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
၃။ မိသားစု နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်ပေးပါ။
အရင်က ရည်းစားနဲ့ပဲ တွေ့နေလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူးမလား။ ခု ယောင်းရဲ့အချိန်တွေကို ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုကို ပေးလိုက်ပါဦး။ သူတို့နဲ့ တူတူ အပြင်ထွက် မုန့်စားတာမျိုး၊ ရုပ်ရှင်တူတူသွားကြည့်တာမျိုး လုပ်ပြီး ဝမ်းနည်းစရာတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။ လုံးဝမေ့လို့ မရသည့်တိုင် ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ခံစားရ နည်းနည်း သက်သာတာပေါ့…
၄။ အဆွေးသီချင်းတွေ၊ အလွမ်းရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ။
ညဘက် အိပ်ခါနီး တစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့ အခါမျိုးတွေက အတွေးတွေနဲ့ လွမ်းဆွေးတတ်တဲ့စိတ်ကို ပိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာ သီချင်းနားထောင်တာတွေ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေကလည်း အရင်က အကြောင်းတွေကို တရိပ်ရိပ်ပြန်တမ်းတမိစေတာမို့ ဝေးဝေးရှောင်ပါ။ စောစောအိပ်လို့ မပျော်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chat တာမျိုး၊ ဖုန်းပြောတာမျိုး၊ မိသားစုနဲ့ တူတူ TV ကြည့်တာမျိုးတွေ နဲ့ လေ့လာမှတ်သားစရာ စာအုပ်ဖတ်တာတွေ၊ Game တစ်ခုခု ဆော့တာတွေကလည်း အဲ့ဒီအရာတွေကို မတွေးဖြစ်တာမို့ လုပ်ကြည့်နော်။
Related Article >>> အသည်းကွဲပျောက်ဆေးဆိုတာ တကယ်ရှိလား?
၅။ အချိန်ခဏလေးအတွင်း နောက်တစ်ယောက် ထပ်ထားတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။
အရင်လူကို ရွဲ့ ချင်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ဖြေဖျောက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ နောက်တစ်ယောက် ထပ်မထားမိပါစေနဲ့ ယောင်းတို့ရေ။ ကိုယ်က တကယ်မချစ်ဘဲ တွဲမိတာမို့ နောက်လူအတွက်လည်း မကောင်းသလို ကိုယ့်အတွက်လည်း ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
၆။ တစ်ခုခုအပေါ် စိတ်နှစ်ကြည့်ပါ။
ကောင်းတဲ့အရာ တစ်ခုခုအပေါ် စိတ်နှစ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အရာ တစ်ခုခုကို သေချာလေ့လာတာမျိုး၊ သင်ယူတာမျိုးကလည်း စိတ်ညစ်စရာတွေ မတွေးမိဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ဘဝဆိုတာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထူပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထမှပဲ ရမှာမို့ ချစ်သူနဲ့ ဝေးရရုံနဲ့ မပြိုလဲပါစေနဲ့ နော်။
ဒီ နည်းလမ်းလေးတွေက ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲပြီးစ ပူဆွေးပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ယောင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကုသဖို့ မလှယျပမေဲ့ …
ကိုယျ သိပျခဈြရတဲ့သူနဲ့ လမျးခှဲရတဲ့အခါ ဘယျလောကျထိ စိတျကိုထိခိုကျနာကငျြရလဲဆိုတာ ကိုယျကိုယျတိုငျက လှဲပွီး ဘေးကလူတှကေလညျး သိပျနားမလညျပေးနိုငျကွပါဘူး။ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြက လူတှကေ အသညျးကှဲဖူးတဲ့သူတှေ ဖွဈသညျ့တိုငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူတဲ့အတှကျ နားလညျမပေးနိုငျကွတာကလညျး ပုံမှနျပဲလနေျော…
လမျးခှဲပွီးနောကျပိုငျး အရငျလို တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အဆကျသှယျတှေ မရှိကွတော့တဲ့ အခါ … အရငျက အတူတူစားခဲ့ဖူးတဲ့ မုနျ့တှေ၊ ဖုနျးပွောခဲ့ဖူးတဲ့အခြိနျတှေ၊ အတူတူသှားခဲ့ဖူးတဲ့ နရောတှေ ပွနျတှေးကွညျ့မိသလို ဒီအခြိနျဆို သူဘာတှမြေား လုပျနမေလဲ၊ ဘယျသူတှနေဲ့လဲ၊ ဘယျမှာ ရှိနမှောလဲ က အစခြီလို့ အတှေးပေါငျးစုံနဲ့ အရူးတဈယောကျလို ပူလောငျနတေတျကွတဲ့ အဖွဈကိုလညျး ခဈြသူနဲ့ လမျးခှဲပွီး အသညျးကှဲဖူးတဲ့ မိနျးကလေးတိုငျး ခံစားဖူးမှာပါ။
ဘယျလောကျပဲ သတိမရအောငျနနေေ၊ ဘယျလောကျပဲ မထေ့ားတယျဆိုဆို တိုကျဆိုငျတာတှေ ကွုံလာတဲ့အခါ … တယောကျတညျးအထီးကနျြနတေဲ့အခါ…ဝမျးနညျးစရာတှေ ရှိလာတဲ့အခါမြိုးမှာ ဖုနျးကောကျဆကျပွီး သူ့ကို ရငျဖှငျ့ခငျြတဲ့ စိတျတှကေ ကနျြနသေေးတာ မဟုတျလား…
ဒါပမေဲ့ … ကိုယျ့စိတျကို အလိုလိုကျပွီးတဲ့နောကျ ဆကျဖွဈလာမယျ့ အရာတှကေို ရငျဆိုငျနိုငျရဲ့လား? သူ့ဘကျက ဖောကျပွနျလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ သဘောထားခငျြး မတိုကျဆိုငျလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘယျလိုမှ ညှိမရတော့လို့ပဲဖွဈဖွဈ … ဘယျလိုအကွောငျးမြိုးကွောငျ့နဲ့ပဲ လမျးခှဲ လမျးခှဲ … ပွနျပတျသကျလို့ အဆငျမပွတေဲ့ relationship မြိုးအတှကျဆိုရငျတော့ အဓိက ကိုယျ့စိတျကိုယျ ပွငျဆငျတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီလိုပွငျဆငျဖို့အတှကျ ဘာတှမြေား လိုအပျမလဲ??
၁။ ဒဏျရာကကျြဖို့ အခြိနျပေးပါ။
အခြိနျကာလတခု အထိ တူတူရှိနတေဲ့ အတှကျ ခကျြခငျြးကွီး မပေ့ဈလိုကျဖို့ ဆိုတာ ဘယျလှယျပါ့မလဲ။ ဒီတော့ မဖွဈနိုငျတဲ့ အရာကို အတငျးကွီး မလုပျယူဘဲ သတိရတဲ့ အခြိနျမှာ သတိရပါ။ ငိုခငျြလာရငျ ငိုခလြိုကျပါ။ ဒီလို လုပျခွငျးက တမွညျ့မွညျ့နဲ့ အကွာကွီး မခံစားရတော့ဘဲ ကွာလာတဲ့အခါ ဝဒေနာက တဖွေးဖွေး လြော့ပါးလာပါလိမျ့မယျ။ ခံစားရတဲ့ ဝဒေနာတှေ သကျသာလာလလေေ ဒဏျရာကကျြဖို့ နီးလာလလေပေါ။ အမာရှတျကနျြတာတော့ ကနျြတာ တဈပိုငျးပေါ့လေ…
Related Article >>> အသညျးကှဲခွငျးက ပေးနိုငျတဲ့ သငျခနျးစာ (၄)ခု
၂။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဂရုစိုကျပါ။
အိပျခြိနျမှနျမှနျအိပျ၊ အစားပုံမှနျစားပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လှအောငျနပေါ။ ခဈြသူနဲ့ ကှဲလို့ နခေငျြသလိုနတေယျဆိုတာ ကိုယျ့အတှကျ အရှုံးတှခေညျြးပါပဲ။ ကိုယျ့ကို မခဈြလို့ နီးစပျဖို့ မကွိုးစားဘဲ အဝေးခံလိုကျတဲ့သူအတှကျ ကိုယျ့ဘဝတခုလုံး ရစေုနျမြောပဈစရာ မလိုပါဘူး။ အရငျ သူမရှိခငျကလညျး တဈယောကျတညျးပဲ နခေဲ့တာပဲလေ။ တဈယောကျတညျး အားနတေဲ့အခါမြိုးတှမှော မကောငျးတဲ့အတိတျက အမှတျတရတှကေို တှေးနမေယျ့အစား Youtube ကနေ makeup tutorial တှေ ကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ လှအောငျပွငျနလေိုကျပါ။ မိတျဆှသေဈတှေ ရှာပါ။ တျောသညျထကျ တျောလာအောငျ ကွိုးစားပါ။
တဈခုရှိတာက အသညျးကှဲနတေဲ့အခြိနျတှမှော ခဈြကွညျနူး၊ တဈတီတူးနကွေတဲ့ အခဈြငှကျတှကေို ကွညျ့မိရငျ ကကျြစပွုနတေဲ့ ဒဏျရာက ပွနျအကျကွောငျးထငျလာတတျတဲ့ ပွဿနာပါပဲ။ ခဈြသူမြားနလေို့ နမြေို့းဆို ပိုဆိုးပေါ့… အိမျတှငျးပုနျးနပွေနျရငျလညျး အထီးကနျြ၊ အပွငျထှကျရငျလညျး အတှဲလေးတှကွေညျ့ပွီး ကွကှေဲဆိုတော့ ဘာလုပျလို့ လုပျရမှနျးမသိပေါ့… ဒီလိုအခွအေနမြေိုးဆို တဈခကျြခုတျ၊ နှဈခကျြပွတျစမေယျ့ အဖွကေတော့ ပတျဝနျးကငျြသဈမှာ မိတျဆှသေဈတှေ ရှာဖှတောပါပဲ။ ဥပမာ မနှဈက For Her Myanmar က စီစဉျပေးခဲ့တဲ့ Single Ladies’ Night လိုပှဲမြိုးပေါ့… သူငယျခငျြး အသဈတှနေဲ့လညျး ဆုံနိုငျသလို ကိုယျလညျး လှလှပပလေး ပွငျဆငျလို့ရတယျ၊ စိတျသဈလူသဈပုံစံမြိုးလညျး ဖွဈသှားတယျ၊ အခဈြငှကျတှကေိုလညျး မကျြစိနောကျစရာ မလိုတော့ဘူးလေ… ဒီနှဈ ခဈြသူမြားနေ့ (၁၄.၂.၂၀၁၉)မှာလညျး ဒီလို ပှဲမြိုးလေး စီစဉျထားပေးဦးမှာပါလို့… အသေးစိတျကတော့ မကွာမီ လာမညျ မြှျောပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
၃။ မိသားစု နဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို အခြိနျပေးပါ။
အရငျက ရညျးစားနဲ့ပဲ တှနေ့လေို့ သူငယျခငျြးတှကေို အခြိနျမပေးဖွဈခဲ့ဘူးမလား။ ခု ယောငျးရဲ့အခြိနျတှကေို ခဈြရတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ နဲ့ ကိုယျ့ရဲ့မိသားစုကို ပေးလိုကျပါဦး။ သူတို့နဲ့ တူတူ အပွငျထှကျ မုနျ့စားတာမြိုး၊ ရုပျရှငျတူတူသှားကွညျ့တာမြိုး လုပျပွီး ဝမျးနညျးစရာတှကေို မထေ့ားလိုကျပါ။ လုံးဝမလေို့ မရသညျ့တိုငျ ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူတှေ၊ ကိုယျက ခဈြတဲ့သူတှနေဲ့ ဆိုရငျတော့ ခံစားရ နညျးနညျး သကျသာတာပေါ့…
၄။ အဆှေးသီခငျြးတှေ၊ အလှမျးရုပျရှငျတှနေဲ့ ဝေးဝေးနပေါ။
ညဘကျ အိပျခါနီး တယောကျတညျးရှိနတေဲ့ အခါမြိုးတှကေ အတှေးတှနေဲ့ လှမျးဆှေးတတျတဲ့စိတျကို ပိုဖွဈစတေတျတယျ။ အဲ့လိုအခါမြိုးတှမှော သီခငျြးနားထောငျတာတှေ၊ ရုပျရှငျကွညျ့တာတှကေလညျး အရငျက အကွောငျးတှကေို တရိပျရိပျပွနျတမျးတမိစတောမို့ ဝေးဝေးရှောငျပါ။ စောစောအိပျလို့ မပြျောတဲ့အခါ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Chat တာမြိုး၊ ဖုနျးပွောတာမြိုး၊ မိသားစုနဲ့ တူတူ TV ကွညျ့တာမြိုးတှေ နဲ့ လလေ့ာမှတျသားစရာ စာအုပျဖတျတာတှေ၊ Game တခုခု ဆော့တာတှကေလညျး အဲ့ဒီအရာတှကေို မတှေးဖွဈတာမို့ လုပျကွညျ့နျော။
Related Article >>> အသညျးကှဲပြောကျဆေးဆိုတာ တကယျရှိလား?
၅။ အခြိနျခဏလေးအတှငျး နောကျတဈယောကျ ထပျထားတာမြိုးကို ရှောငျပါ။
အရငျလူကို ရှဲ့ခငျြလို့ဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျ့ဝမျးနညျးမှုတှကေို ဖွဖြေောကျနိုငျဖို့ပဲဖွဈဖွဈ အလှယျတကူ နောကျတယောကျ ထပျမထားမိပါစနေဲ့ ယောငျးတို့ရေ။ ကိုယျက တကယျမခဈြဘဲ တှဲမိတာမို့ နောကျလူအတှကျလညျး မကောငျးသလို ကိုယျ့အတှကျလညျး ရရှေညျမှာ အဆငျပွနေိုငျမှာ မဟုတျပါဘူးနျော။
၆။ တဈခုခုအပျေါ စိတျနှဈကွညျ့ပါ။
ကောငျးတဲ့အရာတခုခုအပျေါ စိတျနှဈကွညျ့ပါ။ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ အရာ တခုခုကို သခြောလလေ့ာတာမြိုး၊ သငျယူတာမြိုးကလညျး စိတျညဈစရာတှေ မတှေးမိဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးပါ။ ဘဝဆိုတာက ကိုယျ့ကိုကိုယျ ထူပွီး ကိုယျ့ဟာကိုယျထမှပဲ ရမှာမို့ ခဈြသူနဲ့ ဝေးရရုံနဲ့ မပွိုလဲပါစနေဲ့ နျော။
ဒီ နညျးလမျးလေးတှကေ ခဈြသူနဲ့ လမျးခှဲပွီးစ ပူဆှေးပွီး စိတျဓာတျကနြတေဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ အသုံးဝငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Tags: Cure, Heart broken, love, Relationship, sad, Time
ရှေ့ဆက်လက်မတွဲသင့်သော မိန်းကလေးအမျိုးအစား (၅) မျိုး
Megan January 23, 2019